Celebs « THE CINEMA TIMES
बेल्जियममा बोल्ड गरिमा !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । अभिनेत्री गरिमा पन्तको छवी नेपाली सिनेमाका लागि सरल, सोझी, सालिन छ । रेखा थापा हट छवीमा पर्दापण हुने समयमा गरिमा भने सरल छवीमा प्रस्तुत हुन्थिन ।
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । वर्षको प्रतिक्षित सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’को भव्य रेड कार्पेट प्रिमियर सम्पन्न भएको छ । राजधानीको कुमारी हलमा सम्पन्न प्रिमियरमा सिनेकर्मी र सिने पत्रकारको बाक्लो
Congratulations: निशा र शरद विवाह वन्धनमा ! (फोटोफिचर)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । अभिनेत्री निशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद भेस्वाकर विच आज शुभविवाह सम्पन्न हुदैछ । आफ्ना नजिकका आफन्तहरुलाई मात्र निम्त्याइएको विवाह अहिले काठमाडौँको तारे होटेलमा चलिरहेको छ
पोस्टरमा महशुस गर्नुहोस् पल र पुजाको प्रेम !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । असार ३० मा प्रदर्शन हुने ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ चर्चामा रहेको सिनेमा हो । सार्वजनिक गीत र ट्रेलरले नै सिनेमालाई उच्चतम चर्चा दिलाएको छ ।